कहिल्यै नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती? यी हुन् दिमाग कमजोर बनाउने १० गलत बानी ! | कहिल्यै नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती? यी हुन् दिमाग कमजोर बनाउने १० गलत बानी ! – हिपमत
कहिल्यै नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती? यी हुन् दिमाग कमजोर बनाउने १० गलत बानी !
मुख्यतयाः तपाईंको दैनिक जीवनयापनको कारण दिमाग कम जोर भइरहेको हुन्छ । सामान्य लाग्ने कतिपय बानीव्यवहारले मानिसको मस्तिष्कमा नराम्रो असर पारिरहेको हुन्छ । जसको कारण छिट्टै विर्सने, पढेको कुरा याद नआउनुका साथै दैनिकमा कामकाजमा समेत झमेला ब्यहोर्नु परिरहेको हुन्छ ।
यस्तो सम स्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाने र अन्तमा दिमागमा खतरनाक समस्या पैदा हुने विभिन्न अनुसन्धानमा देखाइएको छ ।मानिसका केही यस्ता बानी छन् जसले उनीहरुको दिमागमा प्रत्यक्ष अ सर पारिरहेका छन्ः
खानपानमा ला परवा ही :व्यस्तताका कारण कतिपय मानिसहरु खाना समयमा नखाने, अस्व स्थ खाना खाने गरिरहेका हुन्छन् । जसले शरीर मात्र होइन दिमाग पनि कम जोर बनाउँछ । बिहान खाने विहानदेखि लिएर रातिको खानासम्म स्वस्थ खान जरुरी हुन्छ । विहान खाली पेट बस्दा तपाईंको दिमागले काम गर्न सक्दैन र त्यसपछि धेरै खाना खाँदा दिमागमा उल्झन पैदा हुन्छ । जसले गर्दा तपाईं दिनभरी राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्न ।
धु मपा न:धु मपा न स्वास्थको लागि हा निका रक छ । यसले जीवनलाई छोट्याउने मात्र होइन दिमागलाई पनि कमजोर बनाउँछ । म्याकगिल युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनका अनुसार धु मपा नले मस्तिष्कको सं वेदन शील भाग कर्टेक्सलाई सीधा अस र गर्छ जसको कारण स्मरण शक्तिमा कमी आउँछ ।
गल त बानी:आजभोलि मानिसहरुको जीवनशैली अन्तर्गत राति अबेरसम्म नसु त्ने, व्यायाम नगर्ने जस्ता बानीहरु पर्छन् । राति अबेरसम्म ल्यापटप, मोबाइल वा कम्प्युटरको अगाडि बस्नाले दिमागमा सीधा अ सर पर्छ ।
पानी कम पिउँदा:तिर्खाएको मानिसले भन्दा पानी पिउने मानिसको दिमाग १४ प्रतिशत तेज हुन्छ । यदि तपाईँ लामो दुरिको यात्रा, कुनै परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने साथमा पानी बोक्ने बानी बसाल्नुहोस् जसले तपाईंको दिमागलाई ताजा बनाइराख्छ र कुनै पनि महत्वपूर्ण कुरा बिर्सनबाट जोगाउँछ ।
अल्छी:अल्छी मानिसहरुको दिमाग कम रच नात्मक र कमजोर हुन्छ । किनकी उनीहरु दिमागको प्रयोग नै धेरै गर्दैनन् । तपाईं जति धेरै दिमागी काम गर्नुहुन्छ त्यति नै दिमाग रचनात्मक र सिर्जनशील बन्छ । साथै हरेक दिन कसरत गर्दा पनि दिमागलाई शक्ति मिल्छ र राम्रोसँग काम गर्न सक्छ ।
तना व:तना वले पूरै शरीरको शत्रु हो । त्यसैले त नावबाट मुक्त हुन जरुरी छ । तनावले दिमागमा नराम्रो असर गर्छ । जब तनाव हुन्छ तब हाम्रो मृगौलाले तनाव () ग्रन्थीको उत्पादन गर्छ । धेरै तना व ग्रन्थीको उत्पादन हुँदा दिमागमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
ईयरफोन:तपाईंले देख्नुभएको होला प्रायः मानिसहरु आजभोलि कानमा ईयरफोन र हेडसेट लगाएर गीत सुनिरहको हुन्छन् । तर लामो समयसम्म ईयरफोनको प्रयोग गर्दा कानसँगसँगै ब्रेन टिशुजको पनि नोक्सान पुर्याउँछ । लगातार यसो गर्दा अल्जाइमरको समस्या हुन्छ ।
निन्द्रा:एकजना स्वस्थ्य व्यक्तिलाई हरेक दिन ७ देखि ८ घण्टा सम्म सुत्न जरुरी हुन्छ । यसले दिमागलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यदि निन्द्रा पुगेन भने दिमागले भोलिपल्ट राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । जसले गर्दा दिमागले काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ । एक्लोपन:केहि मानिसहर भिडभाडभन्दा एकान्तमा बस्न रुचाउँछन् ।
बुधबार, कार्तिक १२, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
घरको पुजाकोठामा सालिग्राम भगवानको स्थापना गर्नुहोस,सबै समस्याबाट मिल्नेछ मुक्ति